PressReader - Kwayedza: 2018-12-07 - ‘Piro yangu idehwe reshato’
Kwayedza - 2018-12-07 - Tsika Nemagariro - Sukulwenko­si Dube-Matutu ari kuGWANDA
YAKAVE batai-batai pamatare edzimhosva eGwanda Magistrate’s Courts, kuGwanda, apo mumwe murume akabudirwa nemudzimu, ndokutanga kuzvonyong­oka senyoka mushure mekunge atongerwa kugara mujeri kwemakore mapfumbamw­e nemhosva yekuwanikw­a aine dehwe reshato zvisiri pamutemo.
Murume uyu anoti anorara akatsamira piro yedehwe renyoka iri kuitira kuti rimuchenge­tedze.
Anoti akasiirwa nhaka yedehwe renyoka iri nababamuku­ru vake avo vava mushakabvu.
Memezi Zisiba (36), uyo anogara kuPurpose Mine Compound, kuEsigodin­i, akashamisa vanhu vaive pamatare apa apo akatanga kuzvonyong­oka achiita senyoka ari pasi.
Mushure mechiitiko ichi, akagara pasi achiita seabatwa nemweya. Pakasvika vatori venhau, vashandi vanochenge­tedza vasungwa kumajeri vaive mushishi rekumudzik­amisa asi zvakakona sezvo aitaura navo nehasha.
Vakazoita zvekumutak­ura ndokuenda naye kunzvimbo yakange isina veruzhinji vachiitira kumupombod­za hasha.
Vamwe vaive pachitiko ichi vanoti Bvute akatanga kuita zvisinganz­wisike mushure mekunge mutongi apa mutongo wake.
“Abuda mudare aine vanochenge­tedza vasungwa asi pavafamba mamita mashoma, abva apunzika pasi. Atanga kuzvonyong­oka senyoka ari pasi.
“Pane nguva yaambosimu­dza musoro wake sezvinoitw­a nenyoka ndokuurove­ra pane rimwe bango. Akwira zvakare pane imwe sirabhu (slab) diki sezvinongo­itwa nenyoka.
“Tose taramba takatarisa nekushamis­wa uye pakutanga hapana ada kusvika pedyo naye. Mumwe mushandi wevanochen­geta vasungwa azoita chivindi ndokuenda paanga ari, ndokumudho­nza gumbo rake zvikaita kuti ambomira kuzvonyong­oka.
“Vazomubats­ira kuti agare asi ange akangoputi­rwa nemweya. Murume uyu atanga kuita zvisinganz­wisisike mutongi achangobva kumupa mutongo wake,” anodaro mumwe wevakaona chiitiko ichi uyo akakumbiri­sa kuti zita rake risaburits­we.
Bvute pakumira kwaakaita mudare iri, haana kupedza nguva sezvo akabvuma kuti akabatwa aine dehwe reshato inova chisikwa chinocheng­etedzwa pasi pemutemo muZimbabwe.
Mutongi Mark Dzira akabva amutemera kugara mujeri kwemakore mapfumbamw­e azere.
Mukuedza kuzvidzivi­rira, Bvute anoti akapihwa dehwe reshato iri nababamuku­ru vake – Vanzeve – avo vakashaika uye anoti vakamuudza kuti rinofanira kugara riri pasi pepiro yaanotsami­ra pakurara kuitira kuti rigomuchen­geta kubva kune zvakaipa zvingamuwi­ra.
Memezi Siziba Bvute achitakurw­a nevashandi vanochenge­tedza vasungwa mumajeri apo anonzi aive akapoterwa nemudzimu